कोरोना ठिमी, दुवाकोट र चन्द्रागिरिमा: सवारी पास बनाएर उपत्यका छिरेका थिए तीनै जना ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना ठिमी, दुवाकोट र चन्द्रागिरिमा: सवारी पास बनाएर उपत्यका छिरेका थिए तीनै जना !
कोरोना ठिमी, दुवाकोट र चन्द्रागिरिमा: सवारी पास बनाएर उपत्यका छिरेका थिए तीनै जना !
काठमाडौँ – मंगलबार काठमाडौँ तथा भक्तपुरम कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएका तीन जना नै लकडाउनमा उपत्यका प्रवेश गरेको खुलेको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा कोरोना पुष्टि भएकी ३३ वर्षीया महिला, भक्तपुरमा कोरोना पुष्टि भएका २७ वर्षिय पुरुष र २५ वर्षिया महिला तीनै जना लकडाउनमा उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ।
बताइएअनुसार, काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका ९ की ३३ वर्षिया महिला कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं आएकी थिइन्। उनी आइतबार मात्र सवारी पास बनाएर उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै पारिवारीक कार्यक्रमको लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर गएकी थिइन् ।
यस्तै भक्तपुर निवासी २५ वर्षिया महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख २९ गते नै काठमाडौं उपत्यका छिरेकी थिइन् भने उनी ठिमीस्थित साथीको कोठा बसेकी थिइन्।
भक्तपुरकै अर्का संक्रमित २७ वर्षिय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। केहीदिन अगाडी काठमाडौ आउने सवारी पास बनाएर काठमाडौ छिरेका पाइएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेपछि उनी दुवाकोटस्थित आफ्नै डेरामा बसेका थिए।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबियामा ६७४ नेपालीमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको छ । साउदी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका अनुसार साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा ३३६, पश्चिम क्षेत्रमा १४८, रियादमा क्षेत्रमा १७५, कसिम र हायल क्षेत्रमा तीन÷तीन तथा अन्य स्थानमा नौ नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको छ । साउदीको पूर्व क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
सङ्क्रमितमध्ये कैयौँ निको भई काममा फर्किसकेको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु भएको साउदी सरकारले पुष्टि गरेको छ । साउदीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४२ हजार ९२५ पुगेको छ । सङ्क्रमितमध्ये हालसम्म १५ हजार २५७ निको भएका छन् । हालसम्म २६४ सङ्क्रमितको मृ-त्यु भएको छ।
पहिरो पिडितलाई सहयोग गर्न राहत लिएर लमजुङ पुग्यो इन्द्रेणी